साताको शेयर बजार : आठ अर्ब ६९ करोडको कारोवार | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more साताको शेयर बजार : आठ अर्ब ६९ करोडको कारोवार
March 30, Mon
साताको शेयर बजार : आठ अर्ब ६९ करोडको कारोवार
फागुन १० गते, २०७६ - १७:०३
काठमाडौं । लगातार उकालो लागेको धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार नेप्से परिसूचकले नयाँ इतिहास कायम गरेको छ । साताभर बजारले उकालो यात्रा अर्थात् ‘बुलिस टे«न्ड’ पछ्यायो । बजार उकालो लागेर डेड वर्ष पहिलेको भन्दा माथिको अवस्थामा पुगेको छ । लगानीकर्तामा एक प्रकारको विश्वाससमेत पैदा भएको छ । यसले बजारमा नयाँ लगानीकर्तासमेत थपिएका छन् ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार साताभर कूल १८१ कम्पनीको रु आठ अर्ब ६९ करोड ८९ लाख ६५ हजार ४७४ मूल्य बराबरका कूल दुई करोड ५३ लाख ३३ हजार ५५९ कित्ता शेयर कारोवार भए । बजार ओरालो लागेर न्यून विन्दुमा आइपुगेको नेप्सेको उकालो यात्रासँगै कारोवारमा देखिएको यो सुधार पछिल्ला दिनको सबैभन्दा बढी हो ।
साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक आज झण्डै २० अङ्कले बढ्यो । सो दिन विभिन्न चार कम्पनीका शेयरमा सकारात्मक ‘सर्किट’समेत लागेको थियो । त्यस दिन नेप्सेमा १९.३९ ले वृद्धि भई एक हजार ३६३.९७ मा पुगेको थियो । कूल १७६ कम्पनीका ४१ लाख पाँच हजार १३४ कित्ता शेयर रु एक अर्ब ९७ करोड ८१ लाख आठ हजार ७०१ बराबरको कारोवार भए ।
सोमबार नेप्से परिसूचक आज ३४ अङ्कले बढ्यो । लगातार उकालो लागेको बजारमा त्यस दिन नेप्सेले नयाँ इतिहास कायम गरेको थियो । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्सेमा ३४.२४ विन्दुले बढेर एक हजार ३९८.२४ मा पुग्यो । झण्डै रु दुई अर्ब ७० करोड जतिको कारोवार भयो । कूल १७५ कम्पनीका ६४ लाख ७४ हजार ७५० कित्ता शेयर रु दुई अर्ब ६८ करोड ७५ लाख ३३ हजार ४४२ मूल्यमा खरिद–बिक्री भए ।
मङ्गलबार नेप्सेमा १.७७ ले वृद्धि भई एक हजार ४००.०१ मा पुग्यो । लामो समयपछि नेप्सेले एक हजार ४०० माथि पुगेको हो । नेप्सेमा झिनो सुधार देखिए पनि कारोवार रकम भने रु दुई अर्ब माथि पुगेको छ । कूल १८१ कम्पनीका ५४ लाख ६८ हजार ४८३ कित्ता शेयर रु दुई अर्ब १२ करोड ५९ लाख ७७ हजार ३४ बराबरको कारोवार भयो ।
बुधबार नेप्सेमा ५.२४ विन्दुले सुधार आई एक हजार ४०५.२५ मा पुग्यो । त्यस दिन कूल १७७ कम्पनीको ३४ लाख ५५ हजार ६८२ कित्ता शेयर रु एक अर्ब ६२ करोड ८८ लाख ४१ हजार ३८९ मूल्यमा खरिद–बिक्री भए । बिहीबार नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले वृद्धि भयो । लगातार उकालो लागिरहेको बजारले नयाँ उचाइ कायम ग¥यो । त्यस दिन नेप्सेमा २९.३२ अङ्कले बढेर एक हजार ४३४.५७ मा पुग्यो । कूल १८० कम्पनीका ५८ लाख २९ हजार ५१० कित्ता शेयर रु दुई अर्ब ७८ करोड ५० लाख चार हजार ९०८ मूल्यमा खरिद–बिक्री भए ।
फागुन १० गते, २०७६ - १७:०३ मा प्रकाशित
गरिखाने वर्ग भोकै मर्दैन, सरकार साथमा छ : डा. खतिवडा
काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमणकोे त्रास र त्यसले निम्त्याएको दुष्प्रभावलाई...
प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतबाट नेपाली मजदुर र विद्यार्थीकोको यस्तो पत्र
काठमाडौं । दार्चुला पारि भारतीय क्षेत्र धार्चुलामा फसिरहेका र स्वदेश फर्कन खोजिरहेका नेपालीहरूलाई...
गण्डकी प्रदेश सरकारले निःशुल्क राहत प्याकेज ल्याउने
कास्की । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनका कारणले प्रभावित...
भारतमा कोरानाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३५ पुग्यो
एजेन्सी । भारतमा कोरोना भाइरसबाट ३५ जनाको मृत्यु भएको छ । सोमबार मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र र पश्चिम...
यो महामारीका बेला मेरो चरित्र हत्या गर्न खोजियो – स्वास्थ्यमन्त्री
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारले कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका...
ललितपुरको भट्टेडाँडामा दुई साइकलयात्रीको मृत्यु
ललितपुर । वाग्मती गाउँपालिका वडा नं ३ भट्टेडाँडाको झाँक्रीडाँडा सडकमा दुर्घटना हुँदा भारतीय दुई...
वीर अस्पतालमा कोरोनाको आशंका गरिएका दुई जनाको मृत्यु
काठमाडौं । काठमाडौंको वीर अस्पतालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंका गरिएका दुई बिरामीको मृत्यु भएको...
आइसोलेशनमा मृत्यु भएका थापाको कोरोना रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’
बुटवल । बुटवलस्थित कोरोना भाइरस विशेष अस्थायी अस्पताल आइसोलेशनमा आइतबार अपराह्न मृत्यु भएका बिरामीको...
१५ जना कैदी कैद किनेर छुटे
चितवन । कारागार कार्यालय भरतपुरमा रहेका १५ जना कैदी कैद किनेर छुटेका छन् । सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको...
विदेशबाट फर्कनेलाई विमानस्थलमा जाँच नगरिँदा यस्तो समस्या आएको गुनासो प्रचारमा छ, यसबारे मन्त्री ज्ञवाली के भन्छन् ?(अन्तर्वार्तासहित)
काठमाडौं । विश्वका अधिकांश सरकार र नागरिक विश्वका प्रायः सबै मुलुकमा फैलिइरहेको कोरोना संक्रमणको...
कोरोना महामारीविरुद्व लड्न राष्ट्रिय युवा संघद्वारा नेता तथा कार्यकर्तालाई ६ बुँदे निर्देशन
कोभिड–१९ एक वर्षभन्दा कम कैद तोकिएका एक सय ६९ कैदी कारागार मुक्त
लकडाउनका कारण कुखुरा व्यवसाय समस्यामा
कोभिड -१९ नियन्त्रणका लागि सातै प्रदेशमा सामग्री
कोरोनाको कहरः जर्मनीका प्रान्तीय अर्थमन्त्रीद्वारा आत्महत्या
राधेराधेको १७ तले भवन अब खाद्यान्न भण्डार
सञ्चार क्षेत्रका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन प्रेस युनियनको आग्रह
राष्ट्रपति ट्रम्पले भने – ह्यारी र मेघानले आफ्नो सुरक्षा खर्च आफैं व्यहोर्नु
सर्वदलीय विपत् कोषबाट भरतपुर अस्पताललाई ५० सेट पिपिई
नेपालीको प्रशंसा गर्दै बेलायती राजदुतले नेपालीमै लेखिन्, ‘दयालु र उदार चरित्रले गर्दा नै नेपालीलाई विश्वभर माया गर्छन्’